Haweenaydii Ugu Horaysay Ee Muslim Ah Oo Taariikhda France Jagada Wasiirka Tacliinta Loo Dhiibo +VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Haweenaydii Ugu Horaysay Ee Muslim Ah Oo Taariikhda France Jagada Wasiirka Tacliinta Loo Dhiibo +VIDEO
Najat Vallaud-Belkacem, oo ah gabadh muslim ah ayaa noqotay haweenaydii ugu horaysay, taariikhda dalka Faransiiska ee qabata jagada wasiirka waxbarashada dalkaas, waxa kale oo ay gabadhani mar kale noqotay qofka ugu da’da yar guud ahaan xubnaha golaha wasiirada ee dalka Faransiiska Soo Mara.
Najat Vallaud-Belkacem, oo raysal wasaaraha dalka Faransiiska Jean-Marc Ayrault, u magacaabay wasiirka Tacliintu waxa ay sanadkii 1977-kii ay ku dhalatay dalka Morocco degmo ku taala oo lagu magacaabo, Beni Chiker gobolka Nadura ee degaanka Amazigh, oo dhaca waqooyiga dalka Morocco.
Najat Bil Qaasim waxa iska dhalay aabe Reer Morocco ah iyo hooyo reer Algeria ah, waxaana iyadoo shan jir ah sanadkii 1982-kii, qoyskoodu u haajiray dalka Faransiiska, halkaas oo aabaheed Bil Qaasim uu ka shaqayn jiray, isaga oo ahaa injineer dhismaha ka hawl gala.
Najat Vallaud Belkacem ayaa wax ku baratay kuna barbaartay dalka Faransiiska waxaanay daraasaysay, culuunta siyaasada, iyada oo markii ay jaamacada dhamaysatay waxay guursatay, Boris Vallaud, sanadkii 2005-tii, waxa ay si rasmi ah ugu biirtay hisbiga hanti wadaaga ee dalka Faransiiska.
Markii 2012-kii madaxweynaha Faransiiska loo doortay François Hollande waxa loo magacaabay, wasiirka arrimaha xuquuqda aadamiga u qaabilsan xukuumada Faransiiska, waxa kale oo ay ahayd afhayeenka rasmiga ah ee xukuumada gaar ahaan arrimaha faafinta rasmiga ah iyo barnaamijka gudaha dalka.